Ku tabaruca - Gargaarka Masiibooyinka ee Is-kaashatada
Bogga ugu weyn/Nalasoo
Waxaa jira habab badan oo lagu taageeri karo dhaqdhaqaaqa dadka ka hooseeya, kahortagga musiibada, waxaana jira bulshooyin badan oo la soo deristay xiisad ba'an oo u dhaxaysa musiibooyinka cimilada iyo COVID19. Intaa waxaa sii dheer, aafooyinka inta badan waxay qaataan sanado si ay uga soo kabtaan iyo bulshooyinka iyo kooxaha maxalliga ah ee abaabulaya waayo-aragnimada soo kabashada joogtada ah ee dhaqaalaha iyo baahida agab ee masiibooyinka ay warbaahinta guud u tixgeliso warar hore.
Hoos waxaa ku yaal dhowr siyaabood oo aad dhaqaale ahaan ugu taageeri karto dadaalladan halista ah ee socda:
TAAGEERADA SHAQAALAHA KAALMOONKA CAAWIMADA SHAQADA EE SHAQADA
Gargaarka Musiibada ee Wadajirka ah waa hoosta, dadka ku shaqeeya, dhammaan shabakadaha mutadawiciinta ah ee taageeraya bulshooyinka saameynta ku yeeshay, gaar ahaan kuwa ugu liidata, inta lagu jiro dhibaatooyinka. Gargaarka Musiibada ee Is-kaashatada ah waxay u shaqeysaa iyada oo aan xafiis-dowladeed ama cajalad casaan ah iyo qaabkeenna dabacsan uu awood u leeyahay inuu sameeyo isku-dallaar kasta oo doollar ah si uu u sameeyo saameynta ugu wanaagsan ee ka jawaab celinta baahiyaha is-go'aaminta ee ka-badbaadayaasha musiibada. Mabda'a "midnimo, maahan sadaqo" macnaheedu waa in ficiladu ay ku saleysan yihiin baahiyaha la sheegay ee dadka laftooda, iyagoo la shaqeynaya iskaashi halkii ay ka maamuli lahaayeen kor. Fadlan tixgeli inaad si deeqsinimo leh ugu tabarucdo si aad u keento gargaar wax ku ool ah oo musiibo ah oo ku saleysan mabaadi'da midnimada, isu-gargaarida, iyo waxqabadka tooska ah ee is-maamul ee xitaa bulshooyin badan oo ay saameysay musiibo. Waa kuwan dhowr dariiqo oo lagu taageerayo shaqadeena:
Ku tabaruc Gargaarka Musiibada ee Labada Dhinac halkan inaan shaqadeena ku sii wadno hal mar ama tabaruc soo noqnoqda bil kasta, oo awood leh oo aan ku hubinno Wepay. Ama ku tabaruc iyada oo loo maro Venmo (@MutualAidDisasterRelief) ama PayPal ([emailka waa la ilaaliyay]).
Naga caawi sidii aan u kobcin lahayn kaabayaasha gargaarka ee Musiibada ee Gargaarka Degdegga ah ee loogu talagalay wax ka qabashada annaga oo ku deeqayna kuweenna Ololaha Kaabayaasha Kaabayaasha Musiibo ee Musiibada marka, si wada jir ah, waxaan u sii wadi karnaa in aan dhisno awood halka nalalka ay ka soo baxayaan dhulka kor, oo aan siino xitaa waxbadan bulshooyinka ku dhibtooday soo kabashada. Tani waxay naga caawin doontaa inaan helno gaari, mashiinka qoraxda, ambalaaska, ama waxyaabo kale oo dabeecaddaas ah.
Iibso qalabka ilaalinta shakhsi ahaaneed iyo agabyada kale ee ay u baahan yihiin jawaab-bixiyeyaasha iyo badbaadayaasha si toos ah annaga oo soo marinna - Louisiana Amazon Wishlist, ama noo Liistada Rabitaanka Florida
Waxaan sidoo kale heysanaa a Ololaha Puerto Rico Dib-u-dhiska loogu talagalay horumarinta kaabayaasha madaxbannaan iyo waarta ee qaababka nidaamka nadiifinta biyaha iyo qorraxda qoraalada qoraxda ee Puerto Rico.
Si aan ugu tabarucno dadaalkeenna wadajirka ah ee wax ka qabashada daadadka Michigan, riix halkan.
Fursadaha kale ee tabaruca ayaa ah tabaruca howlaheena socda lacag u aruurinta kuleylka inta lagu guda jiro jiilaalka ee qoysaska 'Lakota' ee 'Resine Reservation'.
Iyada oo leh fursado badan oo internetka ah oo wax looga qabto baahiyaha dadka isla markiiba iyo si toos ahba, waxaan ku dhiirigelinaa dadka helitaanka maal inay taageeraan coronavirus si toos ah u taabato dadka haddii ay awoodaan. (Hoos eeg). Haddii aadan awoodin sabab kasta ha noqotee, lacag ayaan aruurineynaa halkan si ay u taageeraan jawaabta shabakada ee Coronavirus. Lacagta laga aruuriyo aruurintaan ayaa loo adeegsaday iibsiga sahayda badan, iyo sidoo kale taageerida dadaallada iskaashi ee wadaagga ah ee COVID19 iyo abaabulayaasha sida ay u gargaaraan bulshada ugu nugul iyo dadweynaha. Waxaan sidoo kale bilownay a maaskaro aruurin in si gaar ah loo ururiyo tabarucaadka si loo iibsado amarro fara badan oo waji xidh ah iyo in la taageero kooxaha xiisaha leh ee guryaha lagu isticmaalo si loogu qaybiyo shabakadaha kooxaha gargaarka wadaagga ah ee bixiya daryeelka safka hore ee beelahooda.
Ma xiiseyneysaa inaad sameysid gaari ama ku deeqa guryaha, ama inaad nooga tagto dardaarankaaga? Bal eeg annaga Dhaxalka Wadajirka: Hagaha Bixinta Qorshaysan ama Email noogu soo dir [emailka waa la ilaaliyay] oo noo soo sheeg waxa aad maskaxda ku hayso oo aan si wada jir ah u baari karno si wada jir ah!
Ma haysaa xoogaa lacag ah oo crypto ah? Waxaad ku tabaruci kartaa halkan:
XUQUUQDA DHAQAALAHA KAALMOODKA Kahortaga masiibo ee XIISAHA ​​DIIWAANKA IYO MACLUUMAADKA MAALIYADU WAA INUU KA SAMEEYAA ADEEGYADA GUUD EE DIIWAAN GELINTA TILL-BILAASH EE GOBOLKA 1-800-HELP-FLA (435-7352), AMA (850-410) KELITAANKA FLORIDA, AMA BADAN KU SAABSAN Webside-ka 'WWW.3800HELPFLA.COM' DIIWAAN GALINTA CH800. Isdiiwaangelintu Uma Saxeexdo Awood-siinta, HESHIISKA, AMA TAHRIIBKA DAWLADDA, WAA IN AY SAMEEYSAAN DHAQANKA, AQOONSIGA AMA AQOONSIGA GOBOLKA iyo SHAQAALAHA KHILAAFKA, XUQUUQDA IYO KHATARKA HIISE.
TAAGEERADA DADKA AY SAAMEEYSAY SI toos ah
Waxaan ku dhiirigelinaynaa qof walba inuu qaado hindise oo uu si toos ah uga jawaabo baahiyaha dadka. Mararka qaarkood dadka ay masiibooyinka saameeyeen waxay u baahan yihiin in laga caawiyo kharashyo badan, sida bixinta biilasha caafimaadka, kharashyada aaska, helista guri cusub, ilaalinta kirada ama yutiilitida, ama duruufo adag oo la mid ah, waxayna ka faa'iidaysan kartaa xidhiidh shaqsiyeed oo dheeraad ah. Caawinta labada dhinac waxay ku saabsan tahay cilaaqaadka! Haddii aad si toos ah ula xiriiri karto qof wanaagsan. Haddii aad u baahan tahay caawimaad habkan, waanu ku xidhi karnaa Miyaad hoos u dhigtay inaad ballan qaaddo lacag cayiman oo taageero toos ah, oo aad si toos ah ugu xidhan tahay shakhsi ama qoys ay saamaysay si aad u noqoto halbowle u ah iyaga wakhtiga dhibaatada? Hadday haa tahay, aad baad u mahadsantahay! Fadlan ka jawaab baahiyaha dadka ay si toos ah u saamaysay haddii aad awooddo. Haddii sabab qaar ka mid ah aadan awoodin, waa lagu soo dhaweynayaa buuxi foomkan waxaana isku dayi karnaa inaan ku xidhno dadka u soo gurmaday taageerada noocan ah.
Waxaa jira abuuris deegaan oo sii kordhaysa ee dadaalada gurmadka abaaraha ee ay dadka ku shaqeeyaan iyo jawaabaha gargaarka ee labada dhinacba. Waxaan tixgelinaynaa dadka noocaas ah qoyskeenna fidsan waxaanan kugu dhiirigelinaynaa inaad si deeqsinimo leh u taageerto dadaalladaan loogu talo galay diyaarinta masiibada iyo xasilloonida ku saleysan caddaaladda, xiriirada maxalliga ah, iyo wadajirka.
DADKA U BAAHAN TAHAY TAAGEERADA MUHIIM AH
Louisiana waxay la kulantay duufaantii Qaybta 4 ee burburtay sannad -guuradii 16aad ee Hurricane Katrina. Waa kuwan qaar ka mid ah dadaalladii gargaarka qoyska ee fidsanaa oo aan kugu dhiirigelinayno inaad taageerto:
Hoosta Gargaarka Wadajirka ah ee Bayou
Jardiinooyin Kali ah
Qaboojiyaha Beesha NOLA
Guutada baaldi Louisiana
Kooxda Gargaarka Wadajirka ah ee New Orleans
New Orleans Society Aid Society
Kac St James
Isle de Jean Charles Band ee Biloxi Chitimacha Choctaw
Qabiilka Hindida Pointe-Aux-Chien
Atakapa Ishak Qabiil
Haiti ayaa mar kale la kulantay dhulgariirro ba’an. Markii ugu dambeysay ee tani dhacdo 2010, hay'adaha samafalka ee waaweyn ee Mareykanka iyo kuwa caalamiga ah ayaa helay lacago badan, laakiin wax aad u yar ayaa lagu tusay dhulka Haiti. Halkii aad ugu deeqi lahayd Laanqeyrta Cas, ururada la midka ah, ama xitaa Gargaarka Musiibada ee Gargaarka Musiibada ee dadaalladan gargaarka, waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad si toos ah ugu deeqdo ururada Haiti:
Sanduuqa Lambi ee Haiti
Golaha Haitian si loo xoojiyo Ayiti
Haweenka Haitian ee Qaxootiga Haitian
Sanduuqa Gargaarka Degdegga ah ee Haiti
Kalsoonida Bulshada Ayiti
Dhaqdhaqaaqa Shabakada Waxqabadka Qoyska
Xarunta Xaafada Sant La Haitian
Ururka Dayactirka Deegaanka
Kooxda Haweenka Kay Famn
Machadka Caddaaladda & Dimuqraadiyadda
Grassroots International: Taageero Midnimo
Aagga weyn ee Detroit waxaa ku dhacay daadad lama filaan ah. Fadlan ka fiirso inaad ku deeqdo qoyskayaga gargaarka wadaagga ah ee halkan:
Isbahaysiga Gargaarka Mutual Michigan
Fasalka Cuntada ee Detroit
Gargaarka Wadajirka ah ee dhinaca Bari
Gargaarka Mutual Quetzal
Dab ka kacay Pacific Northwest
Waqooyi Galbeed waxay si joogto ah ula kulmaan dab khasaare geystay. Tixgeli inaad ku deeqdo saaxiibadayada iyo la-hawlgalayaashayada halkan:
Duufaannada Eta iyo Iota
Honduras iyo Guatemala waxaa si xoog leh loogu garaacay dhabarka Hurricanes Eta iyo Iota. Halkan waxaa ku yaal xoogaa dhaqdhaqaaqyo iswaafajinaya dadaallada gargaarka ee maxalliga ah waxaan kugu dhiirigelinaynaa inaad taageerto:
OFRANEH (Ururka Madow ee Walaalaha ah ee Honduras) Eta Lacag ururin
Operacion Frijol, iyo. al. Gofundme
Solidarity Engineering Guatemala Roobabka Hurricane
Taageer Gobanimada Cunnada iyo Istaraatiijiyadaha Badbaadinta ee Dadka Asaliga ah ee Ch'orti ee Guatemala
TAAGEERADA COVID19 RESPONSE
Intii lagu jiray xiisadda Coronavirus, waxaa jiray ubax qurux badan oo kooxaha gargaarka wadaagga ah ee maxalliga ah. Riix halkan si aad u aragto hagaha daryeelka guud.
Sanado ayaa laga joogaa markii Hurricanes Irma iyo Maria ay ku dhufteen Puerto Rico, laakiin howsha soo kabashada kaliya ayaa sii socota oo dhulgariirrada iyo aafada ayaa carqaladeeyay awooda jasiiradda si ay mar labaad u soo kabato Tixgeli taageerida qoyskayaga ballaaran ee Centros de Apoyo Mutuo jasiiradda oo dhan.
Aad baad ugu mahadsantahay taageeradaada joogtada ah iyo wadajirkaaga baahinta xukunka, ka jawaab celinta masiibada!